Waa sidee xaalada Muqdisho kadib dagaaladii ka dhacay? – Banaadir Times
Waa sidee xaalada Muqdisho kadib dagaaladii ka dhacay?
By banaadir 26th April 2021 55 No comment
Magaalada Muqdisho waxaa shalay ilaa xalay ka dhacay iska hor imaadyo hubaysan oo u dhexeeya ciidamada dawladda iyo ciidamo kale oo ka soo horjeeda maamulka Madaxweyne Farmaajo oo dhawaan golaha Shacabku u kordhiyay muddo laba sano ah.
Goobaha ay dagaalada ka dhaceen ayaa waxaa kamid ah agagaarka Marinaayada, Xaafada Taleex iyo qeybo kamid ah wadada Maka-Almukarama, waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhsawac ah oo ka dhashaday dagaalada.
Xaalada Goobihii lagu dagaalamay ayaa Maanta ah mid degan, waxaana si teel teel ah u socda dadyow badankood u socda Shaqooyinkooda gaarka ah iyo kuwo xaalada qiimeeynaya.
Goobaha ay dagaalada ka djaceen oo ay kala deganaayeen Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxaa ay ku eedeeyay Dowladda inay, iyada soo weerartay, isla markaana ay iska difaaceen, balse waxaa warkaasi beeniyay Wasiirka Amniha Xasan Xundubeey Jimcaale.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadsa xulgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay dagaaladii dhacay, waxaana uu sheegay in wax walba nabad lagu raadinayo, balse dhinaca kale uu faray Ciidamada Amniga inay waajibaadkooda gutaan.
Wararka la helayo ayaa sheegaya inay socdaan dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisada gacan ka hadalka sababtay ee u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka.
Jabuuti oo ka jawaabtay eedayntii dowladda Soomaaliya
By banaadir 4th March 2021
Rooble oo qorshe cusub ka billaabay Muqdisho
Puntland oo xabsiga dhigtay Ganacsato diiday isticmaalka Shillin Soomaaliga